कसरी बाँधियाे बर्षा सिवाकोटी र प्रकाश सपुतको जोडी ? | GLAMMANDU
कसरी बाँधियाे बर्षा सिवाकोटी र प्रकाश सपुतको जोडी ?
ग्ल्याममान्डु	 Feb 3, 2020
चलचित्र ‘परदेशी २’ मा बर्षा सिवाकाेटी र गायक प्रकाश सपुतकाे जोडी बाँधिने भएकाे छ। नारायण रायमाझीले निर्देशन गर्ने फिल्म ‘परदेशी २’ का लागि निर्माण समुहले नायिका बर्षा सिवाकोटीलाई मुख्य नायिकाको रुपमा अनुबन्धित गरेको छ । तर यसको औपचारिक घोषणा भने निमार्ण समुहले चाँडै गर्ने बुझिएको छ ।
‘परदेशी’मा इन्डियन आइडलको उपाधी विजेता प्रशान्त तामाङ र नायिका रजनी केसीको जोडी थियो । सिक्वेलमा प्रकाश र बर्षा चयन भएका हुन् । फिल्ममा अर्की नायिका पनि रहने बुझिएको छ । ‘परदेशी २’ को छायाँकन केही सातामै सुरु हुनेछ ।
फिल्म ‘परदेशी २’ मा मुख्य नायकको रुपमा गायक प्रकाश सपुत पक्का भएका छन् । प्रकाशले यसै फिल्म मार्फत रजतपटमा नायकको रुपमा डेव्यु गर्न लागेका हुन् । सुपरहिट फिल्मको दोश्रो सिक्वेलमा प्रकाश र बर्षाको जोडी कस्तो देखिएला ? त्याे भने हेर्नै पर्ने छ।
Barsha Siwakotionline khabaronline khabar newsportal nepal nepaliPrakash Saput
नेपालको सिमाना मै हुने भयाे अब कोरोना चेक
आफुलाई क्रिश्चियन भन्नेहरूलाई हिमेश पन्तले दिए यस्ताे जवाफ
सेलिब्रेटीको सेल्फ क्वारेन्टाइन बसाई, कसरी बिताउदैछन् समय ?
महानायक राजेश हमालको भिडियो अपिल
‘बेबी डल’ गायिका कनिका कपूरलाई कोरोना
बलिउडका चर्चित सेलिब्रिटीहरू क्वारेन्टाइनमा, काे काे छन ?